Manao Ny Tononkalo Persiana Ho Manana Endrika Politika Ny Mpisera Facebook Tajik · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jona 2016 10:20 GMT
Ny fonon'ny fitambaram-boky Persianina. Hita ao amin'ny Facebook ireo poety amin'ny andro ankehitriny toa an'i Rumi sy Hafiz. Sarin'ny Wikipedia,
Fantatra amin'ny fiderany ny fitiavana, ny nofinofy ara-moraly sy ny fibanjinana ny fisiana ny tononkalo Persianina nandritra ny taona maro. Anisan'ny malaza indrindra amin'ireo tononkalo Persiana eo amin'ny tontolon'ny teny anglisy i Rumi. Ary eo amin'ny tontolon'ny teny Rosiana i Omar Khayyam .
Saingy ankehitriny mampiasa fomba fampitan-kevitra nohajaina – ao amin'ny Facebook sy ny tambajotra sosialy Rosiana Odnoklassniki – ireo taranaka poety vaovao ao Tajikistan miteny Persiana mba hiatrehana ny olana ara-tsosialy, ara-toekarena sy ara-politika – mitombo tsy misy toy izany manerana ireo firenena Azia Afovoany any amin'ny Firaisana Sovietika taloha.
Naka santionany vitsivitsy tamin'ireo tononkalo nozaraina betsaka tao amin'ny media sosialy ny Global Voices.
Nanamarika tamim-panesoana ilay mpanao gazety tanora, manan-talenta ary mpitsikera antsoina hoe Sayf Safar fa minia tsy mahita ireo olana rehetra ireo ao amin'ny firenena mahantra indrindra ao Azia Afovoany ireo mpiray tanindrazana aminy, fa manome voninahitra ireo manam-pahefana fotsiny mba hanana “fiainana ara-dalàna sy milamina ary hoavy mamirapiratra.”
Mandritra izany fotoana izany, mampitombo avo roa heny ireo ezaka mba hamongorana ny hijabs any amin'ny firenena izay ahitana mponina Silamo mihoatra ny 90% ireo manam-pahefana .
Milaza ny olon-drehetra fa ara-dalàna ny zavatra rehetra
Tsy miresaka afatsy ny momba ny fehiloha ny olon-drehetra
Nandao ny firenena ny fieritreretana rehetra
Tsy misy manaja ny zo ny rehetra eto
Moa toeran'ny hafahafa ve eto Tajikistan?
Mifanohitra ny fahendrena sy ny fivavahana ,
Iray ihany ny loto sy ny kidoro,
Tsy miraharaha ireo lehibe ary tsy mivaky loha,
Feno vovoka ny fitaratra ,
Matahotra aho fa ho avy tsy ho ela ny ISIS,
Matahotra aho fa hanjo antsika ny fahasarotana,
Matahotra aho fa hivadika ho fipoahana ny hakiviana
Matahotra aho noho ny fandrahonana miforona avy amin'ny tsy misy,
Raha miloa-bava aho: moa mpamadika ve ?
Moa ady sy tolona ary fihantsiana ve ny adidiko?
Moa ny ato anatiko feno lolompo sy valifaty?
Zinona moa aho, ho anao? Tsinontsinona?
Niharatsy ny toe-draharaha ara-politika tao amin'ny firenena tato anatin'ny taona vitsivitsy noho ny fanafoanan'ny governemanta ny antoko mpanohitra sy ny famoretana ny fampitam-baovao.
Amin'ny fomba fanehoana ny propagandy Sovietika mahazatra, dia mampifandray ny endrika tsy fitovian-kevitra ara-politika, ara-tsosialy na ara-toekarena rehetra amin'ny famadihan-tanindrazana novatsian'ny vahiny vola ny manam-pahefana .
Mitondra izany rehetra izany ao amin'ireto andininy ireto ny mpampita vaovao any an-tsesitany mpanankarena Zafar Sufi .
Manao hetsi-panoherana mangina ny olon-drehetra, miteny ao anaty fahanginana,
Mitaraina ny olon-drehetra, miresaka faharesena ny olon-drehetra
Tena efa tonga ny fotoana, ry Andriamanitro ô, fa hoy izy ireo: “fahavalon'ny firenena”
Raha misy olona roa miantso olona iray ho ” olona marina”
dia jeren'ny olon-drehetra ao anaty ahiahy ny namany,
Manahy ny olon-drehetra, inona no hitranga.
Hatreto, tsy miraharaha firy ny amin'ny fanenjehana ara-pivavahana sy ara-politika ao Tajikistan amin'izao fotoana ny fiarahamonina iraisampirenena, fa zara raha mandingana fanambarana diplaomatika vitsivitsy.
Manamarika ny maha zava-poana an'izany fihetsika izany i Sayf Safar :
Jereo, nanomana tatitra ny OSCE, nitaraina sady niantsoantso mafy,
Vao avy nanao fanambarana ry zalahy an'i Obama avy ao amin'ny Masoivoho ka nanao hoe: ampy izay,
Nahazo vaovao ihany koa ny olona vitsivitsy tao Bruxelles fa nisy nalefa tany am-ponja ny sasany
Nanoratra andalana vitsivitsy tamin'ny solosaina, nandefa taratasy ihany koa i Washington.
Mahalala ny zava-nitranga rehetra sy ny antsipiriany ny Mpanaramaso ny Zon'Olombelona, ary mimenomenona isan'andro
“Tsy hevitra tsara izany, nalefa am-ponja ireo olona, nahoana?”
Kanefa tsy nisy namaly na dia iray akory aza, tsy nisy ny narary loha avy amin'izany rehetra izany,
Tsy misy vidiny na dia ariary monja aza ireo fanambarana rehetra ireo, ka natsipy tany anaty fako
Maro ireo Tajik no tsy mahita ny ho aviny manokana ao Tajikistan, zava-misy izay nitarika ny an-tapitrisany maro tamin'izy ireo nandao ny firenena ka nandeha nitady asa tany amin'ny firenen-kafa, any Rosia indrindra indrindra.
Nandao ny Tanindrazany ho any Alemaina iray volana lasa izay ilay Poeta Isfandiyor Nazar:
Nisy fotoana tsara nipetrahako sy nitiavako ny tanindrazana,
Feno hamamoan'ny fahasambarana ny foko tao,
Nisy fotoana tsara tsy nilazako na inona na inona ratsy momba ny tanindrazana,
Feno fitiavana sy fifaliana ny tononkalo rehetra momba izany
Kanefa ahoana ny holazaiko ankehitriny, rehefa ny lahatra,
no nanao ahy ho ratsy ahy kokoa noho ny ataony amin'ny fahavalony.
Rehefa ny mpangataka no mahazo vahana amin'ny tanindrazako,
Nandao aho, satria tsy misy toerana ho an'ny fitiavana intsony any amin'izao,
Lasa aho ,satria tsy misy antony tokony hijanonako any intsony,
Lasa aho, satria mihoatra ny fetra ny fampahoriana sy ny fanaintainana.